Shuruudaha & Shuruudaha -
Shuruudaha adeegani waxay ka kooban yihiin xuquuqaha iyo waajibaadka u dhexeeya adiga iyo shirkadda APlus Global Ecommerce.
Si taxaddar leh u akhri heshiiska ka hor intaadan oggolaanin inaad bixiso khidmadda adeegyadayada. Haddii aadan awoodin inaad fahanto qayb ama aad wax su'aalo ah qabtid markaa si xor ah noo weydiiso caawimaad. Waxaan kugula talineynaa inaad qaadato inta ugu badan ee aad u baahan tahay si aad u fahamto adeegga aan bixinno.
"Heshiiska”: Waa heshiiska na dhexmaray adiga iyo annaga.
"Service”: Waa nooca adeegga aad dooratay.
"Waxaad”: Macaamilka ama qofka iibsaday adeegyadeena.
2.1. Waxaad ku magacawday US adeeg la isku afgartay waxaanan ku heshiinay inaanu bixinno adeega loogu talagalay sida ku xusan shuruudaha & xaaladaha.
2.2. Isla marka aad iibsato adeegga, heshiiska noo dhexeeya ayaa la bilaabay.
3.1. Waxaan ku bixin doonnaa adeegyadeena iyadoo lagu saleynayo macluumaadka aad bixisay, iyo wixii xiriir ah ee u dhexeeya koontadaada iibiyaha iyo Amazon
3.2. Lacag bixintaada adeegga mas'uul kama ahan dib-u-soo-celinta dammaanadda leh.
4.1. Waxaan wax ka qaban doonaa arinta sida ugu dhaqsaha badan iyadoo lagu saleynayo macluumaadka aad bixiso.
4.2. Waxaan bixinaa tilmaamo si loola macaamilo Amazon. Waa masuuliyadaada inaad raacdid sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
4.3. Adeegyadeenna waa lagu siin doonaa illaa inta uu ka dhammaanayo muddadeenna adeeggu.
Waxa Aanaan Sameyn
5.1. Ma bixinno nooc latalin sharci ah.
5.2. Masuul kama nihin wax talaabo sharci ah oo lagaa qaado oo ku saabsan waxqabad been abuur ah.
5.3. Ma dalbaneyno wax damaanad ah oo ku saabsan wax ka-hakinta mustaqbalka marka uu waqtigeenna dhammaado.
Maxay tahay inaad sameyso
6.1. Waxaan ku tiirsannahay macluumaadka aad bixiso. Waa inaad ku siisaa dhammaan macluumaadka iyo dukumintiyada asalka ah (haddii la waydiiyo) sida ugu fiican ee aad ogtahay. Arrin kasta oo ka soo baxda wixii ka dambeeya faafaahinta la bixiyey si adag innagama saarna.
6.2. Waa inaad hubisaa inaad ilaalisid xiriir macquul ah inaad nala sameyso inta lagu guda jiro mudadayada adeega si waxtarka ugufiican loo helo. Waxaan kugula soo xiriiri karnaa boostada, telefoonka, fakiska, ama warqad. Fadlan iska hubi inaadan na iska indhatirin ama waxay u horseedi kartaa adeeg aan fiicnayn oo aan masuul ka noqon doonin markaan si joogto ah u nimid.
6.3. U hogaansanaanta siyaasadaha iyo xeerarka Amazon waa waajibaadkaaga.
Sidee Loo Joojiyaa Heshiiska
7.1. Waad baajin kartaa heshiiskaaga annaga. Anaga sidaa darteed waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad noogu soo dirto boostada cinwaanka info@aplusglobalecommerce.com ku saabsan baajinta
Sida aan u joojin karno Heshiiska
8.1. Heshiiska waa la joojin karaa dhinaceena ka hor 14 maalmood oo ogeysiis ah. Hoos waxaa ku yaal kiisaska soo socda ee aan ku qasban nahay inaan joojino heshiiskan.
8.2. Waxaad jabisay shuruudaha & Shuruudaha.
8.3. Macluumaadka aad bixisay waa mid khaldan ama been abuur ah.
8.4. Ma jirin wax waraaqo ah oo kaaga socda dhinacaaga muddo 6 bilood ah (guud ahaan).
9.1. Heshiiskan Adiga ayaa lagu xukumaa sharciyada Hindiya. Muran kasta oo ka dhasha Heshiiska waxaa la tacaalaya maxkamad kasta oo ku taal Hindiya.
Wax ka qabashada Cabashooyinka
Waxaan dooneynaa inaan ku siino adeegyadeena heerka ugu sareeya. Tani waa sababta aan u qiimeyno jawaab celintaada wax badan.
Waa muhiim inaad na ogeysiiso markasta oo aadan ku qanacsanayn adeegga si aan wax uga beddelno oo aan u hagaajino waxa aan bixinno.
Waxaan isku dayi doonaa inaan uga jawaabno sida ugu dhakhsaha badan ee suurta galka ah ee su'aal kasta ama arin kasta waxaanan gacanta ku dhigi doonnaa arimaheena si aan u saxno sida ku xusan heshiiska.
Nidaamkayaga qaadashada Cabashooyinka
Fadlan raac nidaamkan si aad uga caawiso xallinta arrintaada sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Faahfaahinta looga baahan yahay cabashada:
Si aad u sameyso cabasho bixi macluumaadka soo socda ee hoos lagu weydiiyay.
Magacaaga iyo cinwaanka emaylkaaga
Faahfaahin cad ee cabashadaada ama walaacyadaada
Faahfaahin sida aad jeceshahay inaan u saxno xaaladda
Sidee cabasho nooga samayn kartaa?
U soo dir faahfaahintaada iyo cabashada halkaan info@aplusglobalecommerce.com
​Soo celinta iyo Tirtirida
APlus Global Ecommerce ma soo celineyso wax lacag celin ah ka dib marka adeegga la bixiyo. Waa masuuliyadaada inaad fahanto siyaasadaha soo celinta inta lagu jiro iibsiga.
Laakiin xaaladaha gaarka ah, waxaan qaadi karnaa tallaabo lagama maarmaan u ah nooca adeegga aan bixinno.
Waxaan ku sharfan doonaa soo celinta shuruudaha soo socda:
Haddii aadan awoodin inaad hesho adeegga la doonayo markii aad awoodi kari weydo inaad farriin u dirto sababo la xiriira emaylkaaga. Xaaladdaan oo kale, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto ASAP wixii caawimaad ah. Sheegashooyinka waxaa loo gudbin doonaa waaxda adeegga macaamiisha iyadoo qoraal ah. Qoraalka waa in lagu bixiyaa 2 maalmood gudahood laga soo bilaabo amar bixinta ama adeegga waxaa loo tixgelin doonaa inuu helay.
Haddii aadan awoodin inaad hesho nooca adeegga ee la rabo sida lagu heshiiyey. Xaaladda noocan oo kale ah waxaad masuul ka tahay inaad la xiriirto Waaxda Adeegga Macaamiisha muddo 2 maalmood gudahood ah laga bilaabo taariikhda wax iibsiga. Waxaad masuul ka tahay inaad bixiso cadeyn cad oo ka dhan ah adeegga aad iibsatay iyo sharraxaaddiisa. Haddii cabashadu ay umuuqato mid been abuur ah ama khiyaano ah markaa madadaalo iyo maamuus lama yeelan doono
Waad dalban kartaa lacag celin haddii ay dhacdo inaad iibsatay laakiin kahor intaadan helin adeegga loogu talagalay. Waxaad soo diri kartaa codsiga oo ay weheliso sababta lacag celinta.
Waxaan had iyo jeer dooneynaa inaan ku caawino oo aan sida ugu fiican uga faa'iideysano fursad kasta oo aan haysanno si aan kuu caawinno !!!